ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ - Virtua Girl, HD
ကျနော်တို့မရောင်းကြဘူး, ငှားရန်, or otherwise share personal information to any third parties for any reason. We respect the privacy of our users to the highest degree possible. ကျနော်တို့ကိုသူတို့ဆုံးရှုံးအဆီရန်ရှာနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသုံးပြုသူများကိုဒီနေရာမှာသိရ, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ၏ရည်ရွယ်ချက်င်.
ကျွန်တော်တို့ဟာအခြေခံမှတ်တမ်းဖိုင်တွေကိုအသုံးပြုဖို့အများဆုံးစံက်ဘ်ဆိုက်များလိုပဲ. ဒါဟာအင်တာနက်ပရိုတိုကောများပါဝင်သည် (အိုင်ပီ) လိပ်စာများ, ဘရောက်ဇာအမျိုးအစား, အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေး (ISP က), referring/exit pages and platform type. This is not personal information and cannot be linked to any individual person. This general information is used to compile aggregate “trends” about the users of lose leg fat info, ကျနော်တို့အနာဂတ်ဆောင်းပါးများကိုပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အများအပြားစာဖတ်သူများများ၏လိုအပ်ချက်များကိုက်ညီအောင်နိုင်အောင်ကြောင်း - အကူအညီနဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးသောစာမကျြနှာကိုအကောင်းဆုံးနဲ့တူအသုံးပြုသူများကိုလေ့လာသင်ယူ.